आजको राशीफल | Tungoon
Posted by Admin | Jan 28, 2019 | राशिफल |0|
श्रीसूर्य उत्तरायण,शिशिरर्तुः,विरोधकृत् नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४०,विक्रमसम्वत २०७५ साल माघ १४ गते सोमबार नेपाल सम्बत ११३९ पोहेलागा तदनुसार सन् २०१९ जनवरी २८ तारिक कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि साँझ ७ वजेर ५३ मिनेटसम्म उप्रान्त नवमी तिथि,स्वाती नक्षत्र साँझ ७ वजेर ४८ मिनेटसम्म उप्रान्त विशखा नक्षत्र,शूलयोग,बालवकरण, आनन्दादियोग छत्र,सूर्य मकर राशीमा,चन्द्रमा तुला राशीमा । योगिनी ईशान्या दिशामा,काल वायव्य र पाश आग्नेय दिशामा र चन्द्रमा पश्चिम दिशामा भ्रमण गर्ने छन् ।
राहुकालः–अशुभ विहान ८ वजेर १५ मिनेटबाट ९ वजेर ३६ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–विहान १० वजेर ५६ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर १७ मिनेटसम्म रहनेछ । गुली कालः–सामान्य अपरान्ह १ वजेर ३७ मिनेटबाट २ वजेर ५८ मिनेटसम्म रहनेछ । दूरमुहूर्तः–अशुभ मध्यान्ह १२ वजेर ३८ मिनेटबाट अपरान्ह १ वजेर २१ मिनेटसम्म र २ वजेर ४७ मिनेटबाट ३ वजेर ३० मिनेटसम्म रहनेछ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ५५ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर ३८ मिनेटसम्म रहनेछ ।
सूर्योदयबाट प्रातः ८ वजेर १५ मिनेटसम्म अमृत वेला,८ वजेर १५ मिनेटबाट ९ वजेर ३६ मिनेटसम्म काल वेला,९वजेर ३६ मिनेटबाट १० वजेर ५६ मिनेटसम्म शुभ वेला,१० वजेर ५६ मिनेटबाट १२ वजेर १७ मिनेटसम्म रोग वेला,१२ वजेर १७ मिनेटबाट १ वजेर ३८ मिनेटसम्म उद्वेग र वेला, १ वजेर ३८ मिनेटबाट २ वजेर ५८ मिनेटसम्म चर वेला,२ वजेर ५८ मिनेटबाट ४ वजेर १९ मिनेटसम्म लाभ वेला र ४ वजेर १९ मिनेटबाट सूर्यास्तसम्म अमृत वेला रहनेछ ।
सूर्यास्तबाट ७ वजेर २० मिनेटसम्म चर वेला,७ वजेर २० मिनेटबाट ८ वजेर ५९ मिनेटसम्म रोग वेला,८ वजेर ५९ मिनेटबाट १० वजेर ३९ मिनेटसम्म काल वेला,१० वजेर ३९ मिनेटबाट १२ वजेर १८ मिनेटसम्म लाभ वेला,१२ वजेर १८ मिनेटबाट १ वजेर ५७ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,१ वजेर ५७ मिनेटबाट ३ वजेर ३७ मिनेटसम्म शुभ वेला,३ वजेर ३७ मिनेटबाट ५ वजेर १६ मिनेटसम्म अमृत र ५ वजेर १६ मिनेटबाट सूर्योदयसम्म चर वेला रहनेछ ।
मेषः– दैनिक काम सुचारु रुपमा अगाडि बढ्नेछन् । सक्रियता बढाउनु होला । काममा ढिला सुस्ति गरेमा उपलब्धि थोरै हात लाग्नेछ । तर आजको अधिकाँश समय भने अनुकुल नै देखिन्छ । वैदेशिक कार्यबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । जीवन साथिको सहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन हुने नै छ । प्रेरणाका स्रोत भेटिने छन् ।
वृषः– संघर्ष बढि नै गर्नु पर्नेछ । गोपनियता भङ्ग गरेमा आफैलाई घाटा हुनेछ । भय त्रासको अन्त्य हुनेछ । प्रयास र प्रयत्न सफल हुनेछन् । विवादित विषयको टुङ्गो लाग्नेछ । काम गर्दा आफ्नो हात माथि पर्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन् । सहयोग गर्ने कमै भेटिने छन् । नयाँ कार्य योजनाका बारेमा छलफल हुनेछ ।
मिथुनः–अन्योलता हटेर जानेछ । गरेका काम सफल हुनेछन् । विशेष गरेर महिलाको सहयोग लिएर काम गर्नु बढि लाभदायक होला । सक्रिताले नै सफलताको शिखर चढाउनेछ । दैनिक काम काजबाट सामान्य लाभ हुनेछ । यात्रामा कठिनाई आउन सक्छ । आम्दानीलाई बचाउन गाह्रोे हुनेछ । कुरामा भन्दा काममा जोड दिनुहोला ।
कर्कटः–शारीरिक एवं मानसिक शिथिलता बढ्नेछ । काम गर्न मन लाग्ने छैन । घरयासी खर्च बढ्नेछ । सहयोग गर्ने भन्दा माग्ने बढि हुनेछन् । आफ्नो स्वार्थको लागि कसैले उचाल्ने काम गर्न सक्छन् बुझेर मात्र काम गर्नुहोला । भौतिक सुख,शान्तिमा कमी आउनेछ । आहार विहार नमिलाउदा स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ ।
सिंहः– अल्छि गर्दा अवसर गुम्नेछ भने सक्रियताले शिखर चुमाउनेछ । समयको ख्याल राखेर काम गर्नु भयो भने धेरै कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी राम्रै हुनेछ । आफन्तजनबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । कला सहित्य न्याय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । मान सम्मान मिल्न सक्छ ।
कन्याः– ग्रह,गोचर सामान्यतया मध्यम देखिन्छ । प्रयत्नपूर्वं गरेका काम सफल हुनेछन् भने अरुको भरमा मात्रै काम गर्नु भयो भने असफल हुने सम्भावना बढि देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । विना सोच विचार कुनै पनि विषयमा निर्णय लिनु गलत हुनेछ । इष्टमित्र साथी भाईको सल्लाह लिएर काम गर्नु होला ।
तुलाः– भोग विलासिता तिर मात्रै मन नदिई काम तिर पनि ध्यान दिनु होला । सामान्यतया आज गरेका काम सफल हुनेछन् । वास्तुकला तथा निमार्ण सम्बन्धि कामबाट बढि लाभ हुनेछ । वौैद्धिक व्यक्तित्व सँग नयाँ विषय बस्तुका बारेमा विचार विमर्श हुनेछ । आर्थिक कारोवारमा सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
वृश्चिकः– आफुले सोचे जस्तो हुने छैन । परिश्रम अनुसारको प्रतिफल कम मिल्नेछ । खुला रुपमा काम गर्न गाह्रो हुनेछ । गरेका कामबाट आफुलाई भन्दा अरुलाई बढि फाइदा पुग्न सक्छ । भौतिक चिन्तन बढि हुनेछ । व्यर्थको घुमाई फिराई भेटघाटमा समय बढि खर्च हुने देखिन्छ । उपकारी काममा धन खर्च हुनेछ । अस्थिरता बढ्नेछ ।
धनुः–समयको सदुपयोग गर्नु होला ढिला सुस्ति गर्दा उचित लाभ लिन सकिने छैन । एउटा कामको टुङ्गो नलगाई आर्को काममा हात नहाल्नु होला । लगनशिल भई गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । स्वव्यवसायबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । आफन्तका कारण खर्च गर्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थितिको सृजना हुनसक्छ ।
मकरः–स्थिर भएर काम गर्नु होला । तपाईका सोच र विचार सर्वमान्य हुनेछन् । कामले प्राथमिकता पाउनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा अवसरको खोजी हुनेछ प्रयत्न गरेमा प्राप्त हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ । व्यवसायमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । स्वतन्त्र व्यापारबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
कुम्भः–समयमा विस्तारै सुधार आउनेछ । लगनशिलता बढाउनु होला । अरुका कामलाई कम प्राथमिकता दिनुहोला नत्र आफ्ना काम अधुरा रहनेछन् । यात्राको सम्भावना लाई नकार्न सकिन्न । धार्मिक काममा सक्रियता बढ्नेछ । आस्था र विश्वास बढ्नेछ । कला सहित्यतिर मन जानेछ । विरोधी कमजोर बन्नेछन् । समस्या घट्दै जानेछन् ।
मिनः– सोचे जस्तो समयले साथ दिने छैन । नयाँ कामको शुरुवत नगर्नु होला विग्रिने सम्भावना बढि देखिन्छ । गलत विचार बढ्नेछ । उपलब्धि विहिन खर्च बढ्नेछ । आशा र भरोसा निराशामा परिणत हुने देखिन्छ । आर्थिक कारोवारले टाउको दुखाउनेछ । अरुको भर परेर काम गर्नु भयो भने दुःख पाउनु हुनेछ । हासिल उपलब्धि गुम्न सक्छ ।
(राशिफलमा जे जस्तो भए पनि सवैको दिन सुखमय रहोस् । ईश्वर दाहिना हुन । भगवानले रक्षा गरुन । ॐ शान्ति ! ॐ शान्ति ! ! ॐ शान्ति ! ! ! श्रीकुृष्णार्पणास्तु )
Previousपशुपतिमा गुठीको गोलमाल
Nextमाघ २२ र २३ गते लगातार दुइ दिन विदा